Nkowa Gbasara Iru Decentralized Application N'ime Near Protocol - DiutoCoinNews
Nkowa Gbasara Iru Decentralized Application N’ime Near Protocol
BLOCKCHAIN NEWS DeFi
Diutocoinnews	Posted on 08/05/2021
Blockchain agbanweela nke ukwuu n’ime afo ole na ole. Ndi developers’ bu ogidi di mkpa nke teknuzu blockchain. Ndi blockchain software developers na emepe ihe ana por decentralized applications (Dapp) na udi weebu. otu n’ime ihe nruputa kachasi developers maka iwulite Dapps bu NEAR Protocol. Ka I ga emesia kwenye na m na njedebe nke akwukwo a.
Nke mbu, ibu onye NEAR developer, I ga enwe nka ma nwekwaa ihe okike na echiche ohuu nwere ike idozi ezigbo nsogbu. Maka ndi ahu aka ha amachaghi nke oma, ozioma ozo di, NEAR nwere uloru na ihe omumu maka ndi developers nke g eduzi ha ka ha di nma n’ebe oru ha.
NEAR Protocol, dika i nwere ike ima emeela ka o mebie mmepe ma mere onwe ya aha, na akpokari out n’ime ndi asompi Ethereum kachasi elu. NEAR awade a otutu uru I gaghi enweta ebe o bula ozo.
Di ka blockchain developer ma o bu software developer, nwere mmasi na ulo na a blockchain, enwere ufodu oke ichoro ilebanye anya. E buru amuma na ahia blockchain zuru uwa onu ga erute ijeri $42.3 Billion na 2021. Taa ahia ahia blockchain zuru uwa onu nwere isi ego kariri $1.5 Trillion. Enwere ike iri elu iri elu maka oru metutara oru crypto na crypto n’otutu imerime ihe ndi a ga atule n’okpuru, na ihe kpatara ya NEAR nso na steeti ya bu ikpo okwu kachasi mma iji wuo karisia maka ndi Africa.
Azumaahia / Paykwu ugwo kwusiri ike: Agaghi m ekwu na blockchain di 100% echekwa n’ihi na ihe o bula nmadu mere, enwere ya ihu ala. Mana maka ihe blockchain dika NEAR, o na nche akurungwa na wuru n’uzo di out ahu na eti ihe owuwu toro bu foro nke nta ka agaghi ekwe omume. Ozokwa I ga esi na ugwo di elu ma dikwa egwu nke ndi ulo oru odinala na akwu ugwo.
Smart Contracts: Nkwe contracts ndi a na ewepu mkpa maka ndi ozo. N’ihi na e wuru ha site na ntaneti ma chekwaa ha site na protocol nke blockchain. NEAR dika onuogu blockchain nke oma na enye ohere maka iwulite ngwa ndi na eji teknuzu a aru oru.
Nke-onye na Nchekwa igwe ojii: di ka ihe o bụla ozo dijitalu aku i na-achikwa nke nwe nke gi data nke ike-akoro n’oge o bula na ndi ozo na nnoo nnukwu igwe ojii nchekwa. NEAR na-ewu ya na sharding iji hu scability, jiri igodo gi, i nwere ike mfe ịkọrọ gi data na a oso oso karia oso nke ihe oku.
Ngwa ngwa na Scalable: Ethereum na-eche nsogbu mgbe niile ihu ka o ghara ikpuzi. Dika azumahia na-emewanyewanye na okporo uzo blockchain na-eme ya ma yabu na-egbu oge na-enweghị isi. Na NEAR Blockchain bu sharded ruo n’oke nke na enwere ike imekorita azumahia ruru 100000 kwa nkeji. O bu ezie na Ethereum na Proof of Work (PoW) na-aru oru, NEAR na-aru oru na Proof of Stake (PoS) consensus conundrum. Enweghi isi a choro akurungwa iji kwado azumahia na NEAR which nke bukwa uru ozo agbakwunyere.
O buru n’inwere nzulite nzulite blockchain /software development na i nwere mmasi imutakwu biko biko mee nke oma ilele akurungwa ndi a;
Workshop Ihe omumu mmeghe nke ndi nwere akuko mmepe weebu: NEAR 101 https://bit.ly/near-101
Workshop Ihe omumu mmeghe maka ndi Ethereum developers: NEAR 102 https://bit.ly/near-102
Workshop maka ndi oru itumgbere ahia na hackers: NEAR 103 https://bit.ly/near-kba
NEAR Learn Muta weebusaiti: https://near.org/learn/
Blockchain developers bu ndi isi di na blockchain ma o bu protocol iwu o bula n’ebe ahu, ebe ha na-ejikwa usoro ndu niile nke blockchain application. Kedu nke gunyere mana onweghi oke, nyocha, na emeputa ihe owuwu nke blockchain, nkwekorita smart, bulie protocol nkwekorita yana ogbugbu nke blockchain.
Tumadi anyi nwere udi abuo nke blockchain developers;
Blockchain software developer; na-ahu maka iwulite softwares dabere na protocol blockchain, wuo ngwa ndi Decentralized apps (Dapps) yana lekota nchikota ndi na-aru oru ahu.
Core Blockchain developer; Obu ihe kwesiri ka i mebe ulo oru nke blockchain, meputa protocol nkwekorita ma nwekwaa nchebe nke netwoku blockchain.
Iji buru onye blockchain developer, enwere ikike di iche iche n’aka gi, ma gunye ya; Cryptography, smart contracts, data structures, and the blockchain architecture.
Dika onye nruputa blockchain, a na-atu anya ka i mata ukpuru ulo nke blockchain nke nwere ike ibu; Onwe – ebe o bu naani mmadu ole na ole bu akuku nke gburugburu ebe obibi di ka a huru na ufodu nzuko ma anaghi achikwa ya, Oha – usoro ikuku zuru oke, ebe onye o bula nwere ike ibu akuku nke gburugburu ebe obibi site na ime azumahia na ha ma o bu igwuputa di ka bitcoin; ma o bu Consortium – ebe ihe owuwu ahu abughi nke etiti naani ma ndi otu otu nwere ikike maka igbochi ya, o bukwa ndi otu mejuputara ya.
Iwulite n’elu blockchain ma o bu buru onye blockchain developer, enwere asusu ndi a turu anya n’aka gi imu, Python, C ++, Rust, Java na ndi ozo. Ihe NEAR blockchain, na esite site na iji asusu mmemme Rust yana ntoala ntoala nke mmemme i nwere ike ibido ngwa gi na NEAR na idi nfe di ka “nkeji 5”. Otutu ndi developers nwere nzulite na asusu C / C ++ na nghota na itughari n’ime nchara yiri nke ahu nwere ike idi mfe. Ma nye ndi ozo na-enweghi nzulite a nwere ike isiri ya ike na o bu n’ihi na Rust anaghi anabata udi nkwekorita di iche iche ma o bu abstraction nke aghugho. Gukwuo ebe a https://link.medium.com/g7cfizad7db
N’ihi gini ka unu kwesiri-ulo NEAR
Ihe omume di ka Ethereum egosila na mmadu nwere ike iji blockchain meputa ngwa di decentralized apps. Nke a emeghewo uzo maka etinyere ngwa ndi a ga-ewu na blockchain. Ethereum nwere otutu akaghi oghere sitere na ugwo gas di elu iji buru nwayo nwayo. NEAR n’aka nke ozo na-enye scalability nke oru dika Bitcoin na Ethereum ka ga-aru. N’ihe netwok di n’akuku ya, o na-enye ohere ka netwoku nwere ike igbati oso oso ma ruo oru nke oma. NEAR
Na-ewu ulo NEAR na-abia na otutu ezigbo onyinye na nchikota di ka cryptography n’efu na inweta otutu ngwaoru nke na-eme ka usoro ahu dum di mfe. Ndi developers nke wuru na Ethereum na mbu ma choo ugbu a na-agaghari na NEAR ga-enwetakwa ebe obibi.
NEAR developer ugwo oru ugwo dikwa iche na nyiwe ndi ozo dika a na-agbako ya oge o bula a na-eme azumahia na onye nruputa na-ejedebe akuku di mkpa nke ego azumahia ahu.
Enweela otutu oru na-adoro mmasi abanye na NEAR iwu nso ma na-ewu ugbu a na NEAR protocol, ufodu n’ime ha gunyere Balancer, Chain link, Flux, Mintbase, na otutu ndi ozo.
Obi abuo adighi ya, NEAR bu ihe developer ewu ewu ndoti blockchain yinye.
Written by NEARPROTOCOL NIGERIA (NPK GUILD)
Join Near Protocol Nigeria on Telegram
Previous PostAnfani Towa Lori Kiko Ile Eto DAPPS Si Ori Ero Near Protocol
Next PostGoldman Sachs Managing Director Quits Job After Making a Fortune From Dogecoin
Tony Chimdiuto 14/02/2019
Tony Chimdiuto 15/08/2018
Top Four Big Companies and Government Agencies Offering Blockchain Powered Services in Nigeria.
Tony Chimdiuto 08/01/2020